तपाईको बिहे पुजासँग कहिले हुन्छ? भनेर सोध्दा आकासले दिए यस्तो जवाफ (भिडियोसहित)
May 14, 2020 7006
लकडाउ’नका कारण तुलसीपुरमा रहेका नायक आकाश श्रेष्ठले आफ्नो दैनिकीका बारेमा एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत’ बताएका छन् । कामका कारण सँधै काठमाडौंमा हुने आकास दशैं र अन्य चाडपर्वका समयमा मात्र परिवारसंग बस्न पाउँथे । तर लक’डाउनले यो मौका दिएकोमा उनले अहिलेको समयले त्यो मौका दिएको बताए ।
नायक आकास श्रेष्ठ र पुजा शर्माको जोडीलाई फिल्ममा दर्शकले निकै मन पराएका छन् । उनले अहिले “पुजा लगायत साथी’लाई भने निकै मिस गरेको बताए’का छन् । उनले भने, अघिल्लो वर्षमा जस्तो पुजाको जन्मदिन पनि मनाउन पाइन । त्यो कुरा मिस भएको छ । उनले पुजाको जन्मदिनमा आकास निकै निरास देखि’एका थिए ।
त्यतीबेला उनी रोएको भन्ने फ्यानले भनेका थिए । त्यो विष’यमा प्रश्न गर्दा उनले आफु त्यती’बेला विरामी भएकाले अनुहार मलिन देखिएको जवाफ दिएका छन् । उनले आफुहरु’को जोडी मनपराइदिए’कोमा खुसी ब्यक्त गर्दै त्यो आफुहरुका लागि चुनौती पनि थपिएको बताएका छन् ।
केही दिन अघि हि’मालय टेलिभिजनमा भएको ए’उटा रमाइलो कुराको जवाफ पनि आकासले दिएका छन् । पुजा टेलि’भिजनमा अन्तरवार्ताका लागि लाइभ आउँदा आका’सले फ्यान बनेर फोन गरेका थिए ।
पुजा हिमालय टिभीमा लाइभ आ’उने भन्ने थाहा पाएपछि उनले घरमा बसेर रमाइलो गर्न मन लागेर उनको कार्य’क्रममा लाइभ फोन गरेको बताए । तर कार्यक्रम संचा’लक र पुजा हाँस्न थाले’पछि भने आकासले फोन राखेका थिए ।
रमाइलो गर्न फोन गरेका आकासलाई पुजाले आवाज’वाटै चिनेकी थिइन् । उनी एक्कासी हाँस्न ‘थालेपछि कार्यक्र’म सञ्चालक अलमल परे भने आकासले फोन राखे ।
आकासलाई टेलिभिजन कार्यक्रममा फ्या’नले पुजासं’गको रियल जोडी हुने सम्भावना छ की छैन भनेर गरेको प्रश्नमा पनि उनले जवाफ दिएका छन् ।
उनले जोडी मि’लाउने भगवानले हो भन्दै भो’ली के हुन्छ भन्न नसकिने बताए । कलाकार भएको नाताले संगै काम गरेको र विवाहकै बारेमा अहिले नसोचेको बताए । भोली के हुन्छ त्यो भग’वानको हातमा छ उनले भने । भिडियो सहित….
Prevरवि ‘भोजमा सहभागी भए’ भनेर आलोचना गर्नेलाई दिपकराजले दिए यस्तो दनक (भिडियोसहित)
Nextपूर्व युवराज पारस नेपाली झण्डा सहित राहतको बोरा बोकेर पुगे बस्तिमा (भिडियोसहित)
लाईभमै आएर देखाए आकाशले पूजाको माया (भिडियो सहित)